Polar M200, elekere ọzọ ọkachamara na ịgba ọsọ | Akụkọ akụrụngwa
Polar M200, elekere ọzọ pụrụ iche na agba ọsọ
Polar laghachi na ebubo. Otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ama ama pụrụiche na nyocha nlekọta ahụike n'ụwa niile. Nke a bụ otu o si eweta Polar M200, elekere GPS nke emere maka ndị na-agba ọsọ. A mara Polar mgbe niile maka ịmepụta ngwaọrụ arụ ọrụ, obere ihe ndị mmadụ na-eme naanị egwuregwu na-eji eme ihe, na-enweghị ebumnuche ọzọ karịa idobe ya. Ngwaọrụ ndị a na-enwe atụmatụ nke lekwasịrị anya na nguzogide karịa ije ije, ọ bụ ezie na Polar M200 a na-ahụghị ya ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na ngwaọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Polar M200, elekere ọhụụ ọhụrụ nke Polar lekwasịrị anya n'ịgba ọsọ.
Anyị ga-adọ aka ná ntị, elekere Ọ dị njikere ịgwa gị banyere ịchụ ego, ma ọ bụ igosi ya. Ọ ga-enwe ike inye gị ọnụ ọgụgụ ahụike gị, ọ ga-ama jijiji iji gwa gị ozi dị mkpa, ọ ga-adọkwa aka na ntị maka oku, mana ọ nweghị ihe ọzọ. O nweghi ngwa a kapịrị ọnụ, karịrị nke anyị wụnye na ekwentị mkpanaka anyị iji chekwaa ọnụọgụ niile Polar M200 a na-enye anyị. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ nweghị ihe na-eme ka ahụ sie ike, ihuenyo ahụ dị ntakịrị ma nwee agba abụọ.
Na mgbakwunye, o jikọtara GPS, ịgbaso ebe na anya anyị gara. Na azụ ọ nwere ihe mmetụta dị elu nke obi dị mma. N'ụzọ dị otú a, Polar M200 ga-agwa anyị kalori calorie ọkụ, usoro, oge na ogo ụra anyị na oke obi anyị. N’enweghi nhọrọ ndị ọzọ, anyị n’achọghị onwe anyị dịkarịa ala ụbọchị isii nke nnwere onwe. Agbanyeghị, maka ndị hụrụ atụmatụ n'anya, Polar na-ewetara ya agba ise dị iche iche, ojii, ọbara ọbara, ọcha, turquoise na odo, maka uto niile. Ngwaọrụ a ga-ebido na € 150 na nnukwu ndị na-ere ahịa, dịka Amazon na El Corte Inglés.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Polar M200, elekere ọzọ pụrụ iche na agba ọsọ
Iji nwee obi ụtọ na Oculus ị gaghị enwezi ike ịnwe kọmputa dị ike
Samsung Galaxy S8 enweghị bọtịnụ anụ ahụ?